Amanqaku kaJason McCoy Martech Zone |
Amanqaku ngu UJason McCoy
Njengelizwi ngaphezulu kwetalente, uJason McCoy uchitha uninzi lwexesha lakhe kwigumbi elincinci elinephedi emva kwemic. Ilizwi lakhe libonakalisiwe kwiiprojekthi zikaDell, iWalmart, iHonda kunye nezinye ezininzi. Ujolise ekuvakaliseni ukucacisa kunye nevidiyo yokuthengisa kwi-Intanethi. Mamela kwimamela kum Iidemo zikaJason or funda ibhlog yakhe Isikhokelo kunye nezixhobo kwizihloko ezinxulumene nelizwi ngaphezulu.
Inzululwazi yeLizwi eliGqithileyo
NgoLwesithathu, Oktobha 28, 2015 NgoLwesithathu, Oktobha 28, 2015 UJason McCoy
Xa ujonge ukusebenza nelizwi ngaphezulu kwegcisa lakho ekubambeni umyalezo, ividiyo ecacisayo, intengiso okanye nantoni na efuna umbalisi onamava, kubalulekile ukuba ukhethe umntu onetalente efanelekileyo kwiimfuno zakho ezithile. Ilizwi lobuchwephesha ngaphezulu kokuthetha nje amagama athile, ngapha koko, ungayenza ngokwakho! Sebenzisa ilizwi elinamava nelinezakhono ngaphezulu kwegcisa kubalulekile ekunxibelelaneni nomyalezo wakho kwi